काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले एसएलसीमा शून्य नतिजा ल्याएको विद्यालयलाई उत्कृष्ट विद्यालय भनी घोषणा गरेको छ । जिल्ला शिक्षा कायालयको मूल्यांकनमा उत्कृष्ट अंक ल्याएका विद्यालयहरुलाई हटाई मन्त्रालयले चापागाउँको वज्रबाराही उमाविलाई यस वर्षको जिल्लाको उत्कृष्ट विद्यालय घोषणा गरेको हो । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट माघ १८ मा एसएलसी परीक्षाका सन्दर्भम शून्य अंक प्राप्तत गरेकोे वज्रबाराहीलाई नमुना विद्यालय घोषणा गरिएको हो । मन्त्रालयको यस निर्णयके अन्य उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यालयहरुले भने विरोध ...
सुर्खेत । ‘बिहेवारी २० वर्ष पारि’ भनेर प्रचार हुन थालेको दुई दशक भइसक्यो, तर जिल्लामा भने यो नाराले अझै छुन सकेको छैन । स्कुले उमेरमै भागेर बिहे गर्ने चलन बढेको छ । मायाप्रेममा गाँसिएका १३ देखि १८ वर्षसम्मका अधिकांश बालिकाहरूमा अभिभावकको डरका कारण भागेर बिहे गर्ने प्रचलन बढी रहेको पाइएको हो । एक गैरसरकारी संस्थाले गरेको सर्वेक्षणअनुसार शिक्षित बालिकाले भागी विवाह रोज्ने गरेका छन् । बाबियाचौर गाविसमा मात्रै बिहे गरेकामध्ये ९७ प्रतिशतले भागी विवाह गरेको तथ्यांक छ । त्यहाँ तीन प्रतिशतल ...
धादिङ । भनिन्छ, सन्तानको सबैभन्दा ठूलो खुसी आमा हो र त्यसपछि बाबु। तर, तिनै आमाबाबुले गरेको गल्तीको सजाय भोग्दैछन् धादिङका पाँच बालबालिका। तोते बोल्न सिक्ने उमेरका उनीहरु जेलभित्रको उकुसमुकुसमा दैनिकी बिताइरहेका छन्। न सभ्य बोली सुन्न पाउँछन् न कखरा सिक्न। उनीहरुको दिन हथकडीले बाँधिएका हात हेरेर बित्छ।सल्यानटार–१ का दुई वर्षीय सूचक थपलिया १० महिनादेखि कारागारमा छन्। आमा सुस्मिता र बुबा चन्द्रप्रसादले गरेको दोषको सजाय सूचकले पनि भोगिरहेका छन्। आमाबुबा नै अपराधमा संलग्न भएपछि बालबालिक ...
सर्लाही । सर्लाहीको पश्चिमी क्षेत्र गडहिया डुमरियामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति चयनको विषय लिएर शुक्रबार दुई पक्षबीच विवाद हुँदा झडप भएको छ । झडपमा एक दर्जनभन्दा बढी अभिभावक घाइते भएका छन् ।डुमरियास्थित श्री जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठनको विषयलाई लिएर कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंह र तराई मधेस सद्भावना पार्टीका पूर्वसांसद शिवपूजन रायबीच विवाद हुँदा झडप भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ । सिंह सोही निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचित सांसद हुन् भने डुमरियाका राय ...
दाङ । जानकी तिमल्सेना अछामको कालिका माध्यमिक विद्यालयमा पढाउँछिन् । सुदूरपश्चिमका पहाडी गाउँघरमा ‘अभिशापु कै रूपमा रहेको ‘छाउ' ले उनलाई छाडेन । उनी पनि महिनाबारी हुँदा कुनै बेला सात दिनसम्म गोठको अन्धकारमा बसेर निस्किएकी थिइन् । ‘त्यो बेला नयाँ संसारमै निस्किएजस्तो लागेको थियो', छाउको अनुभव सुनाउन स्कुलकी छात्रा शकुन्तला शाहीलाई लिएर दाङ आएकी उनले भनिन्, ‘यो अझै गाउँघरमा चलिरहेकै छ । कति त छाउगोठमै मरिरहेका छन् ।'नेपालका सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका केही जिल्लामा छाउपडी प् ...
शिक्षाविद् एवं शिक्षासेवीहरुलाई 'आजको शिक्षा'को सम्मान
काठमाडौँ । ‘आजको शिक्षा’ साप्ताहिकको दशौँ वर्ष प्रवेशका अवसरमा पत्रिका एवं शिक्षामा विशिष्ट योगदान पुर्याउनुहुने शिक्षाविद्, शिक्षा सेवीहरुलाई सम्मान गरिएको छ । काठमाडौँमा आयोजित भव्य समारोहका बीच शिक्षाविद प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका पूर्व अध्यक्ष डा. बाबुराम अधिकारी, शिक्षाविद् एवं सर्च फर कमन ग्राउण्डका कन्ट्री डिरेन्टर डा. भोला दाहाल, मनाङका जिशिअ रमाकान्त शर्मा, सुर्खेतका जिशिअ जीतबहादुर साह,शैक्षिक गुणस्तर परिक्षण केन्द्रका उपसचिव उत्तरकुमार पराजु ...
दोलखा । शैक्षिक सुधारका लागि ग्रामीण भेगका विद्यालयमा पुगी दोलखाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी विद्यार्थीलाई पढाउन व्यस्त छन् ।नेपाली शैक्षिक बजारमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बिक्ने जनशक्ति उत्पादनको तयारीका लागि जिल्ला शिक्षा अधिकारी नारायणकाजी काशीछेवा कक्षा कोठामा पुग्ने गरेका छन् ।विद्यालयको शैक्षिक अवस्थाको निरीक्षण एवम् अनुगमन गर्ने क्रममा जिशिअ काशीछेवाले शैक्षिक अवस्थाको छड्के जाँच गरी अपुग कुरा विद्यार्थीलाई सिकाउने गरेका छन् । जिशिअले टोलीमा विषयगत विशेषज्ञ र स्रोत व्यक्ति लिएर जा ...
बाँके । गाउँघर नजिक विद्यालय भएर मात्र विद्यार्थी टिक्ने रहेनछन्, बाँकेका अल्पसंख्यक कुचबधियालाई त्यो विद्यालय ‘आकाशको फल’ जस्तो भएको छ । परम्परागत पेसा सिलौटा बिक्री हुन छाडे पछि उनीहरू संकटमा पर्दै गएका छन् । आफ्ना छोराछोरीलाई आर्थिक संकटका कारण विद्यालय पठाउन नसकेका हुन् ।१४ वर्षीया पूजा कुचबधियाले विद्यालय छाडेको ६ वर्ष पुग्यो । दुई कक्षासम्म स्थानीय विद्यालयमा पढिन् । आठ वर्षकी भएपछि काममा सघाउन भन्दै आमाबुबाले विद्यालय पठाउन छाडे । ‘घरमा बस्छु । घरकै काम गर्छु,’ उन ...
काठमाडौं । सरकारले बर्सेनि २ अर्ब रुपैयाँ निःशुल्क पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापनमा खर्च गर्दै आएको छ तर कहिल्यै समयमा सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्दैन। शैक्षिक सत्र सुरु हुनेबित्तिकै पुस्तक नपाएको गुनासो सुनिन थाल्छ। शैक्षिक सत्र सकिन्छ तर यो गुनासो सकिँदैन। पुस्तक नै नहेरी हजारौं विद्यार्थी परीक्षा दिन बाध्य हुन्छन्।यसपालि पनि राम्रो छनक छैन।नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन दुई महिना मात्र बाँकी छ तर किताब विद्यार्थीको हातमा पुग्ने निश्चितता देखिँदैन । पुस्तक छाप्न समयमै रकम छुट्ट्याइए पनि किन विद ...
रोल्पा । ह्वामा ७ लिवन रोल्पामा माध्यमिक तहको पढाइ हुँदै आएकोे आठ वर्ष भयो तर यहाँ मावि तहमा एउटै पनि शिक्षक दरबन्दी छैन। सदरमुकाम लिबाङसँग सीमा जोडिएको गाविसमा माध्यामिक विद्यालय नहुँदा बालबालिका पढाइबाट वञ्चित हुन थालेपछि गाउँलेले मावि सञ्चालनमा त ल्याए तर विद्यालयले शिक्षक दरबन्दी नै पाएन।‘जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन अनुमति पाएको भए पनि माध्यामिक तहमा एउटै पनि शिक्षक दरबन्दी छैनु, प्रधानाध्यापक दलवीर घर्तीमगर भन्छन्, ‘निम्न माध्यमिक तहमा पन ...
मुसीकोट । ३५ वर्षअघि स्थापना गरिएको जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक कलेज मुसीकोट खलंगा बहुमुखी क्याम्पस रुकुममा बर्सेनि विद्यार्थी संख्या घटिरहेका छन् भने शिक्षक संख्या बढिरहको छ।जिल्लाका राजनीतिक दलले आआफ्ना पक्षका शिक्षक नियुक्त गर्दा शिक्षकको संख्या बढेको क्याम्पस प्रशासन पक्षको भनाइ छ। क्याम्पसलाई राजनीति गर्ने थलो मात्र बनाएपछि शैक्षिक विकास सुस्त भएको छ।त्रिभुवन विश्‍वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी २०३८ सालमा आईए तहबाट पढाइ सञ्चालन गरेको यो क्याम्पस सदरमुकाम मुसीकोटमा रहेको जिल्लाको पहिलो ...
रोल्पा । विद्यालय तथा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा जिल्लामा सबै तहमा गरी करिब ७ सय दरबन्दी शिक्षक अभाव रहेको पाइएको छ । विद्यार्थी संख्या अनुसार शिक्षक पूर्ति नहुँदा शैक्षिक अवस्था खस्कँदो छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अनुसार विद्यालय संख्या निरन्तर बढिरहे पनि त्यसअनुसार शिक्षक दरबन्दी नथपिँदा समस्या निम्तिएको जनाएको छ । कक्षाकोठामा शिक्षक उपस्थित गराउन नसक्दा शैक्षिक स्तर बर्सेनि खस्कँदो रहेको उसको भनाइ छ । रोल्पामा अहिले स्थायी दरबन्दीका १ हजार ४५ शिक्षक छ । सबै तहमा करिब ९० हजार विद्यार्थी छन् ...
दश वर्षमा दश सुधार
बितेको दश वर्षमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकसँगै शैक्षिक क्षेत्रमा समेत निकै बदलावहरु आए । शिक्षामा पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्र आयो । लाखौं विद्यार्थी विद्यालयको पहुँचमा आए । लाखौं विद्यार्थीहरु एसएलसी र उच्च शिक्षा उत्तीर्ण भए । लाखौं मानिस साक्षर भए । शिक्षामा नीतिगत, कार्यक्रमगत, व्यवहारिक धेरै सुधारहरु भए । एक हिसाबले भन्ने हो भने गएको दश वर्षले शिक्षामा नयाँ आशाको किरण जगाएर गयो । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म नै नयाँ–नयाँ नीति र प्रविधिहरु भित्रिए । इन्टरनेट र कम्प्यूटर सिका ...
राज्यले अहिले प्राथमिकस्तरको शिक्षकको तलब मासिक २० हजार रुपैयाँभन्दा माथि दिने गरेको छ । माविस्तरको शिक्षकको तलब ४० हजारभन्दा बढी पर्न आउँछ । यत्रो तलब र सेवा राज्यबाट लिने शिक्षकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने पेशागत संघ–संगठनका नेताहरु भने आफ्नो खास काम शिक्षण पेशामा इमान्दार हुनुभन्दा पनि सुविधाका लागि दबाब दिन र राजनीति गर्नमै व्यस्त देखिन्छन् । उनीहरुको दबाबका कारण शिक्षा मन्त्रालयले हालै शिक्षकलाई चौमासिकको सट्टा मासिक तलब दिने त भन्यो तर यसले दुर्गमका शिक्षकलाई झन् शास्ती पर्ने देखिएको छ ...
राम्रा प्रधानाध्यापक बन्ने कि बनाउने ? यो प्रश्न अब ज्वलन्त हुनेछ । किनकी, अब यो जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति आफ्नो विवेकले मात्र नभई कानुनतः योग्य र सक्षम बन्न अनिवार्य हुनेछ । प्रस्तावित शिक्षा नियमावली अनुसार अब खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्यता पुगेको उम्मेदवारले गरेको प्रस्तावलाई हेरेर प्रधानाध्यापक नियुक्त हुनेछन् । उनीसँग छुट्टै सम्झौता गरिनेछ । तोकिएको समयमा नतिजामा सुधार देखिए सम्झौताले निरन्तरता पाउने र असफल भए उनीहरुलाई बर्खास्त गर्ने तयारी शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ । काम नगरेपन ...
रोशन क्षेत्री गाउँले/काठमाडौं मैले भनेजस्तो शिक्षा छैन अचेल । मैले भने जसरी पढाइ पनि हुँदैन । बालमनोविज्ञान केन्द्रित शिक्षा छैन । मैले मेरा कविता बाटै मैले भनेजसरी शिक्षा दिइरहेको छु । मेरा चारवटा बालकविताहरु छन् । जसमा मैले १०० मा ९० प्रतिशत बालमनोविज्ञानलाई ध्यान दिएर लेखेको छु । शिक्षा कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो शिक्षा दिएपछि बल्ल मान्छे ‘मान्छे’ बन्दछ । आफ्नो परिवेश, प्रकृति, विश्व ब्रम्हाण्ड शिक्षामा नै अटाएको छ । हामी शिक्षाबाटै संसार जान्दछौँ । ‘पीपल’ शब्दले ग ...
सुदर्शन सिग्देल, रोशन क्षेत्री ‘गाउँले’/काठमाडौं जिल्लावासीहरु उनलाई थरले भन्दा नामले बढ्ता चिन्छन् । अझ उनको नामसँगै उनले गरेका कामको चर्चा पहिला हुन्छ । ७४ वर्षे यी वृद्ध जवान छँदा स्थापना गरिएको स्कूल पढेर गाउँका युवाहरु शिक्षक, कर्मचारी, पत्रकार, ओभरसियर आदि बनेका छन् । यिनको अगुवाइ, खटाइ सम्झँदा सिन्धुपाल्चोकको सिन्धुकोटमा उनलाई ‘बहादुर’ नभन्ने कमै होलान् । यिनकै जति काम नगरेकाहरुले पनि अहिले राष्ट्रिय चर्चा पाइरहेका छन् तर यिनी गुमनाम जस्तै छन् । तैपनि, विका ...
काठमाडौं । अस्थायी शिक्षकहरुले तत्काल शिक्षकको विज्ञापन गर्न माग गरेका छन् । धेरै अस्थायी शिक्षकहरु ६० वर्षे उमेरहदका कारण बिदा भइरहेका भन्दै उनीहरुले तत्काल आयोग खोल्न माग गरेका हुन् । हिमाली उमावि रत्ने स्याङ्जाका अस्याथी शिक्षक गंगा प्रसाद पंज्ञानीले हरेक दिन ६० वर्ष पुगेर उमेरहदका कारण अवकाश र ४७ वर्ष पुगेर आयोग उत्तीर्ण भएपनि पेन्सन पाउनबाट बञ्चित भइरहेका भन्दै तत्कल शिक्षक आयोग खोल्न माग गरे । बालविकास मावि आलापोट काठमाडौंका शिक्षक जयनारयण चौधरी पनि सरकारले तत्काल शिक्षक आयोग खोल्नुपर्ने ...